Ahoana no fomba fitadiavana fikarohana lalindalina momba ny Amazon?
Ny fanadihadiana fikarohana keyword dia ampahany manan-danja amin'ny fanentanana fanentanana Amazon izay tokony hatao amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny vokatra entinao amin'ny Amazon. Ity dingana ity dia mitaky ny fitadiavana ny teny sy ny fikarohana rehetra mifandraika amin'ny fikarohana izay afaka manatsara ny varotrao. Zava-dehibe ny fisafidianana ny teny mifanentana izay mety hampiasain'ny mpanjifanao hahita ny vokatrao na ireo zavatra mifandraika amin'izany. Io no vahaolana amin'ny fahombiazana satria ny maha-zava-dehibe ny vokatra amin'ny fangatahan'ilay mpampiasa dia hamaritra ny lanjan'ny teny fikarohana izay mifototra amin'ny lisitra. Raha toa ianao ka tsy nijery baiko fikarohana iray farafahakeliny, dia ny fisehosehanao hahita ny valin'ny fikarohana ho an'ny iray amin'ireo fangatahan'ireo mpampiasa dia hampidina. Mba hisorohana ny tsy fahampian'ny vidim-pivarotana dia mila mandinika ny fironana fitadiavam-baovao Amazon ianao ary mamorona lisitry ny teny fikarohana indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hanaovana fanadihadiana amin'ny teny malaza Amerikana tahaka ny pro. Ireo torohevitra rehetra ireo dia mifototra amin'ny zavatra niainantsika manokana. Noho izany, afaka miantso azy ireo ho azo ampiharina sy hahomby isika.
Soso-kevitra sy fitaovana izay hanampy anao hitarika kalitaon'ny Amazon
Ny traikefa manokana
Ny fomba tsara indrindra hita Ny teny mahazatra indrindra amin'ny Amazon dia ny mametraka ny tenanao amin'ny kiraron'ny mpanjifanao. Izany no antony anombohana ny fanentanana fanadihadiana amin'ny fisainana momba izay teny mety hampiasainao ny mpanjifa mety hahita ny zavatrao. Tokony handinika ny anton-javatra toy ny rehefa mividy ny vokatrao, inona ny karazana tiany ananan'izy ireo, ary ny karazana zavatra azony mividy fa tsy ny vokatrao.
Angataho ireo teny fikarohana rehetra izay tonga ao an-tsaina ary hijery azy ireo amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy mba hahitana izay resahana momba ny vokatrao. Hanampy anao hanao fanitsiana sasantsasany ilaina amin'ny lisitra ianao ary hamita azy io. Eto ianao dia afaka mahita tranainy, akronyms, ary fohy izay ampiasaina amin'ny fiarahamonina.
Manontany tena ve ianao hoe ahoana ny fampiasana Amazona noho ny antony fikarohana momba ny teny filamatra? Manao asa tsotra fotsiny izy io. Mila maka taratasy vitsivitsy ianao ao anaty boaty fikarohana ary ny vokatra dia hiseho avy hatrany ho soso-kevitra. Ity asa feno autocomplete ity dia tsy hanome anao amin'ny angona marina araka ny tokony ho izy satria maneho ny fikarohana teny ny ankamaroany. Na izany aza, afaka matoky ianao fa hampiseho ny teny fikarohana ara-dalàna izay azo ampidirina ao amin'ny lisitry ny vokatrao.
Mila mahitsy sy manam-paharetana ianao amin'ny fampiasana ity asa autocomplete ity. Ilainao ny manaraka ny anaran'ny vokatrao miaraka amin'ny litera amin'ny alfabeta ary mariho izay tonga. Tokony hahita ny teny fikarohana sy matanjaka indrindra ianao, izay mifanandrify indrindra amin'ny zavatra anananao. Ankoatra izany, ireo sokajy voafantina dia afaka manampy anao hitady vondrona hafa hamoaka ny vokatrao.
Ny soso-kevitr'i Amazon
Araka ny toro-làlana voalazan'ny Amazon, ny vokatrao dia tsy ho hita afa-tsy amin'ireo teny fikarohana izay ampidirinao ao amin'ny lisitrao sy ny backend. Midika izany fa tokony hampidirinao ny teny fikarohana be dia be ao anatin'io lisitra io, ary koa ny teny ifankafantarana amin'ny teny lava izay mety hahatonga anao hisaroka ny mety ho mpanjifa anao. Na izany aza, tokony hanao izany ianao amin'ny tranga iray raha manana toerana fanampiny ho an'ny teny fanalahidy ianao. Ny tanjon'io tanjona voalohany io dia ny handrakotra ny teny fikarohana izay mamaritra ny vokatrao.
Fanamboarana ny fifaninanana
Raha te hahita ny teny manan-danja indrindra amin'ny fikarohana ianao nefa tsy mandany fotoana sy ezaka be dia be fifaninanana fifaninanana. Ity loharano fanentanana ity dia tsy azo zakaina. Mitadiava ireto teny ireto amin'ny lohateniny, bala, ary famariparitana ao amin'ny fifaninanana. Afaka mahita teny manan-danja sarobidy tsy noeritreretinao ianao. Ataovy azo antoka fa ampiasaina ao amin'ny anaram-boninahitra ny vokatra (f. f. ho an'ny hoditra; ho an'ny hoditra maina; ho an'ny vehivavy, sns. )
Manonona foana aho fa ny herin'io synonymizer io dia tsy voamarina amin'ny tena izy mendrika. Ity fitaovana ity dia mety ho ilaina ho an'ny mpandalina afa-tsy fiteny, ary koa ho an'ny mpivarotra Amazon. Tena manampy tokoa izany raha ny momba ny vokatra izay mety manana anarana mihoatra ny iray, na azo ampiasaina amin'ny toe-javatra samihafa. Ny Thesaurus dia afaka manome anao ny karazana teny sy ny vinavina.
Fampiasana an'ity fitaovana ity ho an'ny fikarohana karohy, dia tokony ho ao an-tsaina ireto manaraka ireto:
mampiasa endritsoratra maro sy tokana;
mitadiava ny teny izay mamaritra ny zavatra tianao hovidina;
aza adino ny mamoaka fehin-teny iombonana;
Aza mitady izay hahitana ny voambolana amin'ny anarana marika.
Ny fitaovam-pikarohana fikarohana
fotoana mampalalaka. Na izany aza, afaka manome anao ny valiny mitovy amin'ny fitaovana fikarohana momba ny teny fikarohana. Raha manana vokatra betsaka amin'ny valinteninao ianao ary te-hampitombo ny varotrao, ny tambajotra matihanina Amazon dia ho tena mahomby amin'ny raharaham-barotrao.
Google no fitaovana lehibe indrindra eran-tany, raha Amazon lehibe indrindra ho an'ny fikarohana vokatra. Midika izany fa ny tahirin-kevitry ny fikarohana ao amin'ny Google dia mitovy amin'ny Amazon. Ampiasao ity fitaovana ity, azonao atao ny manontany izay mety hitadiavan'ireo mpanjifa anao ary mitady teny fikarohana mba hikendrena anao amin'ny famandrihanao Amazon-pifidianana.Ity fitaovana ity dia maimaim-poana ampiasaina ary afaka manome anao ny marina indrindra ao amin'ny tranonkala. Amin'ny fampiasana GKP, dia afaka manamarina ny habetsahan'ny fikarohana amin'ny teny fikarohana ianao, ary mandinika ny toerana misy ny laharan'ny mpifaninana. Na izany aza, tokony ho vonona ianao fa ny data GKP dia mety ho hafa noho ny Amazonia, noho izany dia mila mila manitsy izany ianao.
Noho izany, ny Google Keyword Planer dia manao ny fanitsiana saingy mety ho sarotra ampiasaina. Ankoatra izany, mitaky kaonty AdWords izany.
SEMRush dia fitaovana fikarohana matihanina manan-danja izay hanampy anao hahazo ny tandroka Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia afaka manara-maso ny mpifaninana ianao ary hijery izay teny fikarohana mba hitondra azy ireo ny fifamoivoizana indrindra. Ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny fampisehoana ny teny fanalahidinao Source .